समाचार - सेप्टेम्बर प्रदर्शनीको सारांश
सेप्टेम्बर प्रदर्शनी को सारांश
आठौं (२०२०) चीन एनिमल हसबन्ड्री एक्सपो
यस मेलामा हामी हाम्रो बुथमा दुईवटा मेशीनहरू तयार गर्दछौं।
आइटम नम्बर: MT-101-3
नाम: अण्डा ग्रेडिंग र प्याकिंग मेशीन
१ क्षमता: २000०००--3०००० प्रति घन्टा अण्डा
२. केन्द्रीय संग्रह लाइन वा अण्डा धुने उत्पादन लाइनसँग जोड्नुहोस्
Weight. अण्डालाई वजन र लोड स्वचालित बाट ग्रेडिंग, अगाडि ठूलो टाउको समायोजित गर्नुहोस्, भण्डारणको लागि फाइदा।
L. LCD टच स्क्रीन, बिभिन्न ग्रेडको वजन सेट गर्न सजिलो।
30० अण्डा कागज ट्रे वा प्लास्टिक ट्रेका लागि उपयुक्त।
Auto. स्वचालित डेनेस्टर वा अर्ध-स्वचालित डेनेस्टर
MT-101 अंडा ग्रेडिंग र प्याकिंग मेसिन अण्डा प्रसंस्करणमा दक्षता र खाद्य स्वास्थ्य को "रकेट" को मांगलाई पूरा गर्न डिजाइन गरिएको छ। हाम्रो ग्राहकहरु संग उच्च टीमिंग हाम्रो मशीनहरु बजार मा अधिक लोकप्रिय बनाउँछ, र हामीलाई अधिक सफल मद्दत। बहुउपयोगी मोड्युलर प्रणाली भएकोले वैकल्पिक कन्फिगरेसन थप्न सकिन्छ। अण्डा प्याकिंग स्टेशनहरू र कुखुराको अण्डा फार्मका लागि उपयुक्त। फेयरको समयमा धेरै चाखलाग्दो भयो।
MT-110S अंडा प्याकिंग मेशीन, लाई फार्म प्याकरको रूपमा पनि नाम दिइयो। यसले प्रति घण्टा २000०००-3-3०००० अण्डाहरूसँग ह्यान्डल गर्न सक्दछ। तह फार्ममा धेरै लोकप्रिय। केन्द्रीय संग्रह लाइन सिधा जडान गर्नुहोस्, अण्डाहरू स्वचालित रूपमा लोड गर्नुहोस्, कार्यभार कम गर्नुहोस्।
यो मेशिनले २०० भन्दा बढी टुक्राहरू बेचेको छ, तपाईले हाम्रो मेसिनहरू चीनको हरेक प्रान्तमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि समयमा भ्रमणको व्यवस्था गर्न सक्दछौं। कहिल्यै पछाडि नफर्किनुहोस्। फेयरको समयमा धेरै ग्राहकहरूले यसलाई सोधपुछ गर्छन्।
VIV क्विन्डाओ २०२०
यो मेला हामीले हाम्रो बुथमा फार्म प्याकर पनि देखायो। कोविड -१ still अझै पनि विश्वभरि फैलिएकोले विदेशबाट आएका ग्राहकहरूसँग यस मेलामा भ्रमण गर्न समय दिन सकेन। तर हामी अझै धेरै भेट्न आए।
हामी अर्को चीन एनिमल हसबन्ड्री एक्सपो र भिभ क्विंगदाओ २०२१ मा भेट्न सक्दछौं।
अण्डा प्याकिंग मेशीन, स्वचालित अण्डा ब्रेकिंग मेशीन, उमालेको अण्डा पिलि Machine मेशीन, अंडा क्रमबद्ध र प्याकिंग मेशीन, अंडा प्याकर हेच गर्दै, अण्डा ब्रेकिंग मेशीन निर्माताहरू,